AU oo dhistay guddi baara kufsiga lagu eedeeyey AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18th October 2014 A warsame Featured 0
Mareeg.com: Guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika (AU), Dr Dlamini-Zuma, ayaa sheegtay in la sameynayo koox baara xad gudgub Human Rights Watch ay sheegtay in lagu sameyay haweenka Somali ah kaas oo lagu eedeyay Ciidanka Midowga Africa ee somaliya.
Kooxdan Midowga Africa ay uxilsaarayaan danbiyadan lagu eedeyay Ciidanka Amisom ayaa waxaa ay ka koobanyihiin Afar ruux, waxaana u jira laba haween ah, oo udhashay dalka Ghana, iyo labo ruux kale oo ukala dhashay wadamada Tanzania iyo Zimbabwe iyagoona Midowga Africa iyo leedahay tababarka, aqoonta, khibradda iyo waayo-aragnimo lama huraanka ah ee heer qaran, gobol iyo caalami ah oo ay keeni doonto in ay dhali in dheecaanku ka mid ah mas’uuliyadda aad muhiim u ah.
Kooxda ayaa la xusay inay dhawaan baaritaankan billaabayaan, iyagoo si gaar ah u beegsan doona ciidamada Uganda iyo Burundi oo ay ka tirsan yihiin askartii la sheegay inay kufsadeen haweenka Soomaaliyeed iyo xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee AMISOM oo laga doonayo inay ka sheegaan xaqiiqada eedeymaha la galay si loo ogaado inay run yihiin iyo in kale. Waxaana haddii ay run noqdaan la baari doonaa xilliga ay dhaceen, halka ay ka dhaceen, cidda gacanta ka geysatay iyo sababaha kallifay in laga horjoogsan waayo.
Dlamini-Zuma ayaa xubnaha guddigan kula dardaarantay inay baaristoodani noqoto mid madax-bannaan, xirfad iyo hufnaanna ku dhisan. Waxay kaloo kula dar-daarantay in howshoodu ay noqoto mid wax-tar u leh baahida dadkii dhibaatada loo geystay iyo markhaatiyaasha ay la kulmi doonaan, si ay u ogaadaan xaqiiqada eedeymahan la sheegay.
Kufsiga lagu eedeyay ciidanka Amisom ee somaliya waxaa soo saaray heya’adda Xaquuqda insaanka la jirta ee Human Rights Watch (HRW) waxaana warbixinta lasoo saaray 8dii September, sanadkaan 2014 iyadoona ciwaan looga dhigay warbixintaas “Sida ay Nimankaan nooga Awood badan yihiin”.